IELTS Academic စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုပါ။ | British Council
IELTS Academic စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုရန် ယနေ့ပင် စာရင်းသွင်းပါ။
IELTS Academic - အဆင့်မြင့် ပညာရေး ရပ်ဝန်းအတွက် ပြင်ဆင်လိုက်ပါ။
အဆင့်မြင့် ပညာရေးရပ်ဝန်းအတွက် လိုအပ်သည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု သင့်မှာ ရှိမရှိ ပညာရေးဆိုင်ရာ IELTS စာမေးပွဲမှ တိုင်းတာပေးပါသည်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စကားအသုံးအနှုံးများကို ထင်ဟပ်ပြီး သင်က စတင်ပညာသင်ကြားရန် သင်တန်းတက်ရန် အဆင်သင့် ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးပေးပါသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှန်း နေရာမရွေးဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်အဆင့် ပညာသင်ကြားလိုလျှင်
ယူကေရှိ အဆင့်(၄)တာဝန်ခံသည့် တက္ကသိုလ်အတွက် အဆင့်(၄)ကျောင်းသား/သူဗီဇာ လျှောက်ထားလိုလျှင်
အင်္ဂလိပ်စကားပြော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်လိုလျှင်
ဗီဇာနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက် IELTS ဖြေဆိုရန် တောင်းဆိုသည့် ယူကေတက္ကသိုလ်တစ်ခု တက်ရောက်ဖို့ လျှောက်ထားခြင်း ဖြစ်လျှင်
ဒီစာမေးပွဲကို ဖြေဆိုပါ။ ယူကေဗီဇာနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ (UKVI)IELTS အကြောင်း ဆက်လက်စူးစမ်းပါ။
IELTS Academic စာမေးပွဲကြေး - ၂၉၅,ဝဝဝ ကျပ်
ပုံစံ- နားထောင်ခြင်း၊ ဖတ်ရှုခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း ဟူ၍စာမေးပွဲ အပိုင်း ၄-ပိုင်းရှိသည်။ ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် IELTS ဖြေဆိုရန် စာရင်းပေးသွင်းသောအခါ ဗြိတိသျှကောင်စီ တရားဝင် IELTS စာမေးပွဲဌာနတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
Listening၊ Reading၊Writing စစ်ဆေးမှုများဖြေဆိုရာတွင် အစီအစဉ် မတူညီနိုင်ပါ။ ဤစစ်ဆေးမှုသုံးခုအကြား နားချိန်များလည်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။
စကားပြောစစ်ဆေးမှုကို အခြားအပိုင်းများနှင့် တစ်ရက်တည်းသော်လည်းကောင်း၊ တစ်ပတ်ကြို၊ တစ်ပတ်နောက်ကျ၍သော်လည်းကောင်း စစ်ဆေးနိုင်ပါမည်။ စကားပြောစစ်ဆေးမှုကို အခြားနေ့များတွင် ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် အကြောင်းကြားပါမည်။
၁. ပညာရေးဆိုင်ရာ IELTS စာမေးပွဲ - အပိုင်း (၁) - နားထောင်ခြင်း
ကြာချိန်- ၃၀-မိနစ် + အဖြေစာအုပ်တွင်း ရေးသားရန် ပေးချိန်၁၀-မိနစ်
ပုံစံ- လေသံမျိုးစုံဖြင့် အသံဖိုင် ၄-ခု
ဖြဆိုရာတွင် အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုရပါမည်။
၂. ပညာရေးဆိုင်ရာIELTS အပိုင်း(၂)- ဖတ်ကြားခြင်း
(ဇယား၊ ဂရပ်၊ ပုံများ အပါအ၀င်) လုပ်ဆောင်ဖွယ်များ ပါဝင်သည့် စာပိုဒ်ရှည် သုံးပုဒ်
သရုပ်ဖော်ခြင်း၊ အချက်အလက်ပေးခြင်းမှသည် ဆင်ခြင်မှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတိုင် ပါဝင်သည့်စာပိုဒ်များဖြစ်သည်။ စာဖတ်ကျွမ်းကျင်မှု အမျိုးမျိုးကို စစ်ဆေးရန် ပုံစံထုတ်ထားသည့် မေးခွန်း ၄၀-ပါဝင်သည်။ အနှစ်ထုတ်ရန်ဖတ်ခြင်း၊ အဓိကအချက်သိအောင်ဖတ်ခြင်း၊ အသေးစိတ်အချက်သိအောင်ဖတ်ခြင်း၊ ဒဿနဆန်ဆန် တွေးခေါ်မှု၊ စာရေးသူ၏ ထင်မြင်ချက်၊ သဘောထားနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်သိရှိအောင်ဖတ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ဤအပိုင်းတွင် အချက်အလက်၊ ဆွေးနွေးချက်နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်ချက် စသည်တို့ ပါဝင်သည့် စာပိုဒ်ရှည် သုံးပုဒ် ရှိသည်။ စာအုပ်၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ သတင်းစာတို့မှ ထုတ်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပညာရှင်မဟုတ်သူများအတွက် ရွေးချယ်ထားပြီး တက္ကသိုလ်တက်မည့်သူများ၊ လုပ်ငန်းခွင် မှတ်ပုံတင်လိုသူများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။
၃. ပညာရေးဆိုင်ရာ IELTS စာမေးပွဲအပိုင်း (၃) အရေးအသား
စာသား၊ ဇယား စသည်တို့ကို ဖော်ပြ၊ ရှင်းလင်း၊ အနှစ်ချုပ် ရေးသားခြင်း (အနည်းဆုံး စကားလုံးရေ-၁၅၀)
ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်ပညာသင်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှတ်ပုံတင်လိုသည့် ဖြေဆိုသူများအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သော သင့်တော်သည့် ခေါင်းစဉ်များ ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်ဖွယ် နှစ်ခုမှာ-
၁- ဂရပ်၊ ဇယား၊ ချတ်၊ ပုံပြဇယား တစ်ခုကိုပေးထားပြီး အချက်အလက်များကို မိမိစကားဖြင့် ဖော်ပြခြင်း၊ အနှစ်ချုပ်ခြင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ သင့်အား အချက်အလက် ဖော်ပြ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဖြစ်စဉ် အဆင့်ဆင့်ကို ဖော်ပြခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ခု အလုပ်လုပ်ပုံ၊ အရာဝတ္ထုတစ်ခု၊ အဖြစ်အပျက်တစ်ရပ်တို့အား ဖော်ပြခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်စေပါမည်။
၂- အမြင်တစ်ရပ်၊ ငြင်းခုံမှု တစ်ခု၊ ပြဿနာတစ်ရပ်ကို တုံ့ပြန်ရေးသားစေပါမည်။
နှစ်မျိုးလုံးတွင် စာသံပေသံ မူဟန်ဖြင့် ရေးသားရပါမည်။
၄. ပညာရေးဆိုင်ရာ IELTS စာမေးပွဲ အပိုင်း(၄)- စကားပြော
ကြာချိန်- ၁၀-၁၄ မိနစ်
အကျွမ်းတ၀င်ရှိသည့် အကြောင်းအရာများအတွက် မေးခွန်းအတိုအထွာများ၊ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအပေါ်အသေးစိတ် ပြောဆိုခြင်းများလုပ်ဆောင်ရမည့် စကားပြောစစ်ဆေးသူနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ပြောဆိုခြင်း။
မှတ်ချက်- စာမေးပွဲဌာန တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ စကားပြောစစ်ဆေးမှု အပိုင်းကို နောက်တစ်နေ့လုပ်ရန် စာရင်းသွင်းကောင်း သွင်းရပါမည်။
အပိုင်း(၂)- သင့်အား ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ပြောဆိုခိုင်းသည့် စကားပြောကဒ်တစ်ခုကို ပေးပါမည်။ နှစ်မိနစ်တိုင် စကားမပြောမီ ပြင်ဆင်ချိန် တစ်မိနစ် ရပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာကိုပင် စစ်ဆေးသူမှ မေးခွန်း တစ်ခု၊ နှစ်ခု ထပ်မေးပါမည်။
IELTS Academic စာမေးပွဲအတွက် စာရင်းပေးသွင်းပါ။
အောင်မြင်မှုအစ IELTS က။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ်တက်၊ အလုပ်လုပ်လိုလျှင် ပညာရေးဆိုင်ရာIELTS သည် သင့်အတွက် မှန်ကန်သည့် စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။
သင်စာမေးပွဲ ကောင်းကောင်းဖြေဆိုနိုင်စေရန် ဗြိတိသျှကောင်စီမှ အလေးအနက်ထား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ စာရင်းသွင်းသည့်အခါ နောက်ဆုံးအချိန်အတွက် IELTS သို့သွားရာလမ်း (Road to IELTS Last Minute)သင်တန်းကို အကန့်အသတ်မဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အကြံပြု စစ်ဆေးပေးသည့် ဗီဒီယို (၉)ခု၊ အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်ချက်(၁၀၀)နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုလေးခုမှ တစ်ခုစီအတွက် လေ့ကျင့်ရန် အစမ်းစာမေးပွဲ နှစ်ခုစီ ပါဝင်ပါသည်။
IELTS Academic စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်ကို ရှာဖွေပါ